खोइ हाम्रो सिर्जनशिलता ? – कामना डेली
खोइ हाम्रो सिर्जनशिलता ?
On २०७७ श्रावण १४, बुधबार १०:३७ Last updated Jul 29, 2020
विकास शव्द हामीमाझ लोकप्रिय छ । विकास भन्ने शव्द हामीले छ्यापछ्याप्ती प्रयोग भइरहेको सुन्छौं र देख्छौं । राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि लिएर उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसम्म रातदिन विकास हुँदैछ भनेर नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन कोशिष गरिरहेका देखिन्छ । त्यसो भएका कारण अहिले भाषण, समाचार तथा लेखमा धेरै स्थान ओगटन विकास शव्द सफल भएको छ ।
यस्तो लोकप्रिय शव्द विकास भनेको चाहि के हो ?
यस विषयमा विकासको व्याख्या विभिन्न विद्धानहरुले गरेका छन् । विभिन्न आयामबाट विकासको परिभाषा र व्याख्या गरेका छन् । कसैले आर्थिक परिवर्तन, कसैले सामाजिक परिवर्तन त कसैले सांस्कृतिक भने कसैले भौतिक पूर्वाधारको परिवर्तन हो भनेका छन् । तर त्यस्तो परिवर्तन सकारात्मक हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।सामान्यतया स्थिर बस्तु चलायमान तथा बढ्यो अथवा त्यसको गुणस्तरमा सुधार भयो भने त्यो विकास हो भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै हिंश्रक संस्कृति दयामाया करुणातर्फ अगाडि बढ्यो भने त्यो सांस्कृतिक विकास होला । मान्छे हिड्ने गोरेटो बाटो मोटर हिड्न सक्ने चिल्लो भयो भने सडक विकास होला । वार्षिक ५ हजार आम्दानी हुने परिवारले ५० हजार पु¥यायो भने त्यो आर्थिक विकास होला । मानिसको आयु बढ्यो तथा मृत्युदर घट्यो भने स्वास्थ्यको विकास होला । सञ्चार माध्यम तथा सामाग्रीबाट नागरिकसम्म सहज रुपमा सूचना पुग्यो भने सञ्चार क्षेत्रको विकास होला ।यसरी जुनसुकै क्षेत्रको सकारात्मक अवस्था परिवर्तनलाई विकास भन्ने मानक अहिले स्थापित भइसकेको छ ।
विकास शव्दमा भन्दा पनि विकासलाई मानक बनाउने आधारमा अहिले बढ्ता गडवडी भएको देखिन्छ ।
पश्चिमा मुलुकहरुले स्थापित गरेका मानकहरु अहिले हामी विकासमा स्थापित गर्दैछौं । यसरी उनीहरुले बनाएका मानकका आधारमा हामी कहिल्यै विकसित हुन सक्दैनौ किनभने हाम्रो सिर्जनसिलता खोइ ? हाम्रो मौलिकता खोई ? हामीले पश्चिमा विकासको मोडेल हेरिसक्यौ । त्यसले हाम्रो विकास भन्दा पनि विनाश निम्ताइरहेको छ । यस अर्थमा विनाश । हाम्रो कथित दक्ष भनिने जनशक्ति पश्चिमा मुलुकको सुखसयलको सपनामा पौडिनमै ठिक्क छ । अवसर पाए दुई हात उफ्रिएर विदेश जान इच्छुक बनाएको छ।त्यो भन्दा बढ्ता हाम्रो सिर्जनशिलतालाई ध्वस्त बनाइदिएको छ । हामीमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको छ । हाम्रो धार्मिक आस्थामा भावनात्मक कुठाराघात गरिरहेको छ । हामीलाई ऋणी बनाएर आर्थिक दास बनाउने प्रयत्न गरेको छ । यी सबै गर्नको लागि हामीलाई अफिमले लठ्याजस्तै सिर्जनशील हुन नसक्ने गरी भुत्ते बनाएको छ ।अहिले एउटा तप्का छ विकास भएन भन्ने जो सधै अमेरिका युरोपको तुलना गरेर नेपालमा विकास भएन भन्छ। त्यो तप्काले अघाउने गरी कहिल्यै विकासको अनुभूति गर्न सक्दैन । किनभने पश्चिमा मुलुकले बनाएको विकासको मानकमा हामी उनीहरुभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैनौ । हामी उनीहरु भन्दा पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्न नसक्नु भनेको हाम्रो कथित विकास नहुनु हो ।अहिले हाम्रो सिर्जनशीलतालाई ध्वस्त पार्न बिशेष गरी राजनीतिक दलले मह्त्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेकोे छ।२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरुले नै कसैले स्वीजरल्याण्ड, कसैले सिंगापुर बनाउने भाषण गरे।त्यही भाषणमा हामी नागरिकहरु मख्ख प¥यौ । हामी कसैले भन्न सकेनौ नेपाल नै बनाउने भनेर ।
नेताले हाम्रो सिर्जनशीलतालाई भुत्ते बनाइदिए।अहिले तीनका लाखौ कार्यकर्ताको सिर्जनशिलता भुत्ते भएको छ ।
आप्mनो नेताले जे भन्छ त्यही कुरालाई प्रचार गर्ने बाहेक उसँग नवीन सिर्जनशील कुरा नै छैन । अनि राजनीतिक दलको सकारात्मक विकास कसरी हुनसक्छ? नेतृत्वको विरोध कहि कतै गरिहाल्यो भने पनि पुनः शक्तिमा पुग्नको लागि मात्र उसले विरोध गरेको हुन्छ न कि दलको हितको लागि ।यसरी सिर्जनशिलता गुमेपछि अहिले प्रमुख दलहरुको नेतृत्व अनियन्त्रीत हुँदै जान थालेको छ ।कार्यकर्ताहरु दलको नेतृत्वलाई विचारले नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि विभिन्न गूट खडा गरेर संंख्याको शक्तिको आधारमा नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । असल विचार, सिद्धान्तको पालना भन्दा पनि संख्याको आधारमा नेतृत्वमा पुग्न सकिने भएपछि संख्या पु¥याउन कुशासन हुनु स्वभाविकै भयो । शासनप्रणालीमा भएको कुशासनको प्रभाव कर्मचारी, उद्योगी व्यापारीदेखि लिएर आम नागरिकका संस्थासम्म पनि पर्न थालेको छ । यो प्रभावले उद्योगहरु कसरी राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सिर्जनशिल हुन सकिराखेका छ्रैनन् ।
सरकारको प्यारो भए अवसर पाइने भएपछि कर्मचारी सिर्जनशिल हुन सकिराखेका छैनन् ।
व्यापारीले कालाबजारी गरेर पैसा कमाउन पाएपछि किन सिर्जनशिल हुनुप¥यो पैसा कमाउन। यसरी समाजका प्रतिष्ठित क्षेत्रहरुमा समेत कुशासन देखिन थालेपछि हाम्रो सिर्जशिलता झन् कमजोर बन्न पुगिरहेको छ । कमजोर बनिरहेको सिर्जनशिलताई बृद्धि गर्न सबभन्दा पहिलो विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नु आवश्यक छ। विद्यालय शिक्षालाई पश्चिमी मानकका आधारमा होइन हाम्रै आप्mनै मौलिक मानकका आधारमा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।सिर्जनशिलतालाई सहयोग पुग्ने गरी शिक्षण सिकाई हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ ।कमजोर बनेको हाम्रो सिर्जनशिलतालाई खोजेर हामीमा प्रस्पूmटन नगराएसम्म हाम्रो नेपालको विकास सम्भव छैन । त्यसैले सबैले खोर्जौ हाम्रो सिर्जनशिलता । खोइ हाम्रौ सिर्जनशिलता?
नविकरण गर्न छुटेका फर्मको अवधि भदौ ३ सम्म
दाङमा पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको मृत्यु